Dawladda Soomaaliya Oo Markii Ugu Horeysay Ka Hadashay Mooshinka Madaxweyne Farmaajo – somalilandtoday.com
Dawladda Soomaaliya Oo Markii Ugu Horeysay Ka Hadashay Mooshinka Madaxweyne Farmaajo
Kadib aamusnaan maalmo dhawr ah, xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u muuqata in ay markan go’aansatay in ay ka jawaabto mooshinka kalsooni kala laabashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ra’isulwasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa xalay soo fariistay taleefishinka dowladda ee SNTV, kadibna bixiyay wareysi si toos ah u baxayay, kaas oo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu ka hadlay ay ahaayeen mooshinka.
Mudane Mahdi ayaa mooshinka la keenay ku tilmaamay ‘Hal xaaraan ah’, wuxuuna intaas ku daray in aysan dhalaynin ‘nirig xalaal ah’, isaga oo taas ku fasiray in markii hore ee mooshinka la qabtayba uu ahaa mid aanan sax ahayn maadaamaa uu yiri ‘waxaa laga been abuurtay xildhibaano aanan saxiixin’.
Dhanka kale wasiirka waxbarashada oo ah xubin ka tirsan golaha wasiirada, Cabdullaahi Goodax Barre ayaa isna xalay dhankiisa kasoo muuqday dood ka baxaysay taleefishinka Universal, isaga oo si adag u difaacay madaxweynaha.
Xildhibaanadii mooshinka keenay qaarkood oo doodda fadhiyay, ayaa iyagu ku adkaystay in mooshinka uu sax yahay.